Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Sargaal katirsanaa Ciidamada Puntland oo Maanta goob fagaare ah lagu toogtay
August 19 2017 01:00:10
Sargaal katirsanaa Ciidamada Puntland oo Maanta goob fagaare ah lagu toogtay
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Sargaal katirsanaa ciidamada Daraawiishta maamulkaasi oo lagu helay dambi ah in uu dilay askari isna katirsanaa Ciidamada Puntland.
Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ,Cabdikariin Xasan Firdhiye ayaa sheegay xukun dil qisaas ah lagu fuliyay Gaashaanle dhexe Cayduruus Maxamad oo ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland .
Sargaalkan xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa lagu helay in uu si bareer ah u dilay Ex laba xidigle Cabdiweli Faarax Ismaaciil, waxaana xukunka dilka ah ay fulisay Maxkamada ciidamada Qalabka sida ee Puntland uu ka dhacay magaalada Garawe.
Fagaaraha lagu tooganayay sargaalkan katirsanaa ciidanka Daraawiishta Puntland, waxaa ku sugnaa Saraakiil katirsan ciidamada Daraawiishta Puntland ,Maamulka gobolka Nugaal iyo kan Degmada Garawe.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Maamulka Puntland ayaa marar kala duwan xukuno dil ah ku fulisay saraakiil iyo askar katirsan ciidankaasi oo lagu helay in ay geesteen dilal bareer ah iyo xubno kale oo iyana lagu helay in Shabaab yihiin dilalna geesteen.